Misfit Vapor X: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Misfit bụ otu n'ime ụdị ndị ama ama n'ọhịa nke smartwatches, na ụdị dị ka enwu 2, nke anyị gwara gị n'oge gara aga. Companylọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị smartwatch ọhụrụ ya, nke na-eji Wear OS dị ka sistemụ arụmọrụ ya. Ihe nlereanya a bụ Misfit Vapor X, nke edebeburu ya n’ihu ọha, yabụ anyị maara ihe niile gbasara ya.
Dị ahụ na-enye anyị elekere dị mma, yana ezi obodo, ìhè na imewe ntụsara ahụ iji. Ya mere, Misfit Vapor X a bu ihe nlere anya nke otutu ndi ahia ndi n’eme ka ha cheta nche. Ọ na-arụ ọtụtụ ọrụ anyị na-atụ anya site na ụdị ngwaahịa a.
Thedị ahụ chọrọ imesi ike nke elekere ahụ, nke dị naanị gram 43, yabụ ọ bụ nhọrọ nke nkasi obi dị ukwuu kwa ụbọchị, obi abụọ adịghị ya na ọ bụ nkọwa dị mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ. Karịsịa mgbe a bịara n'egwuregwu, a na-ewepụta ya dị ka isi ihe dị na elekere a.
1 Misfit Alụlụụ X nkọwa
Misfit Alụlụụ X nkọwa
Dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwadoro, Misfit Vapor X a nwere ihuenyo 1,19 inch AMOLED, na dayameta nke 42 mm. Na nke a ọ bụ otu ụdị nke nche ahụ, anyị agaghị enwe ike ịhọrọ oke ya n'okwu a. Họrọ panel AMOLED bụ ntinye aka na nhazi mma, yana ọgụgụ dị mma karịa ihe dị na ihuenyo ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, elekere ahụ ga-enye anyị ọtụtụ nhọrọ nhazi, ebe ọ na-abịa na ngụkọta nke eriri silicone ise nwere ike ịgbanwe. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike iji ya ọ bụla eriri 20 mm.
Banyere processor, ụlọ ọrụ ahụ etinyego aka na kpochapụwo na mpaghara a. A na-eji Snapdragon Wear 3100, nke bụ otu n'ime quintessential processors na Wear OS. Ọ bịarutere na nke a na 512 GB nke Ram na nchekwa dị n'ime nke 4 GB, dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwadoro. Ihe nhazi a na enyere aka kari inwe ndu batrị kariri, ebe o biara na nchekwa ike, n'etiti ndi ozo.
N'eziokwu, nke a Misfit Vapor X ga-enye anyị nnwere onwe nke ụbọchị abụọ. Na mgbakwunye, anyị agaghị echefu na ọ na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa, ọrụ nke doro anya na ọ nwere nnukwu mmasị na nke a. Ebe ọ bụ na ọ ga-enye anyị ohere nke ịchaji elekere n'ụzọ zuru ezu n'otu awa oge. Ọ na-abịa na chaja magnet, nke na-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ 80% na 50 nkeji. Ezi nhọrọ abuo n’echiche.
Sistemụ arụmọrụ na nke a bụ Wear OS, nke biara na ndakọrịta maka gam akporo igwe 4.4 ma ọ bụ karịa ma ọ bụ iOS 10 ma ọ bụ karịa. Dị ka ọ dị na mbụ ekele maka ojiji nke sistemụ arụmọrụ a, Misfit Vapor X na-enye anyị ndakọrịta iji nweta ederede ma kpọọ ọkwa, ọkwa kalenda na ọrụ ndị ọzọ. N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara nlekota oru.
Ọ ga-enye anyị ohere ileba anya na ahụike nke onye ọrụ, yabụ na anyị nwere ihe mmetụta ụda obi. Ọ na-abịa na ngwa arụmọrụ akpọrọ Cardiogram, nke edoziri iji nyochaa ihe ịrịba ama onye ọrụ ahụ dị mkpa. Na mgbakwunye, nche nwere GPS, ọ nwekwara Spotify arụnyere na ndabara na anyị nwere NFC, ka e wee kwụọ ụgwọ iji Google Pay.
Misfit vepo X Nwere ike ịzụta ya na webụsaịtị nke ụlọ ọrụ. Ọ dị ka ọ bụ ugbu a ka naanị ihe anyị nwere ike ịga ịzụta ya. Enweghị nkọwa e nyere banyere mwepụta ya na ụlọ ahịa, mana enwere ike ịnwe akụkọ ọzọ na nke a n'oge na-adịghị anya.
A na-ahapụ elekere anya na eriri dị iche iche ise, site na nke ịhọrọ. Agba ndị ahụ bụ ihe ị ga-ahụ na foto ahụ, yabụ na uto nke onye ọrụ ọ bụla n'echiche a. Ọnụahịa ya bụ otu n'ihe niile, $ 279,99, nke bụ ihe dị ka euro 250 ịgbanwe. Kedu ihe ị chere gbasara smartwatch ọhụrụ a site na ika ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Misfit Vapor X: Smartwatch ọhụrụ ahụ na Wear OS
Nokia weputara nchedo ekwenti ekwenti kariri afọ abuo